iTunes bụ a media management software mepụtara Apple, Inc maka ma windows na Macintosh arụ ọrụ usoro. Na n'elu 85000 fim, ihe karịrị 300,000 na tiivi nakwa na n'elu 43 nde music egwu, iTunes bụ n'ụlọ kacha ntụrụndụ dị ka ị ga-ahụ ihe oké na-ekiri. Apple nwekwara mere ka o kwe ọrụ ịzụta na download music, music videos, fim na-egosi na telivishọn site iTunes niile site na dị nnọọ a mgbata na ekwentị.
Mgbe na-eche otú gị Apple music otu enyere iru gị ịhụnanya maka music? Isiokwu a ga-enyere gị aka ịmata otú ị pụrụ isi tinye songs ka itunes aka, si website, site na IOS ma ọ bụ onye android ngwaọrụ. Ọ ga-eduzi gị na otú ibudata free music ka iTunes si a PC ma ọ bụ a Mac.
Part 1.How ịgbakwunye ebudatara songs ka iTunes aka
Part 2.How ibudata free music ka itunes si website
Part 3.How ibudata free music ka itunes si ios ngwaọrụ (iphone, ipad)
Part 4.How ibudata free music ka itunes si android ngwaọrụ
Part 5.How ibudata free music ka itunes site na PC ma ọ bụ Mac
Part 1. Olee ịgbakwunye ebudatara songs ka iTunes aka
Na ụbọchị ndị a na-amụba ewu ewu na nke ndụ gụgharia nke music, ọtụtụ ndị adịghị achọta mkpa ka ịgbakwunye ebudatara music ka iTunes. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye na music hụrụ n'anya, ị ga-mkpa mgbe niile tinye ọdịnaya enwetara site na ndụ concerts, E, music enwetara site na ndị ọzọ weebụsaịtị ka iTunes maka mfe ohere. Luckily agbakwunye ebudatara music ka iTunes bụ ihe dị mfe ọrụ na-agụnye ndị na-esonụ atọ nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1: Chọpụta download nchekwa.
Jide n'aka na ị pụrụ ịchọta faịlụ na ọnọdụ ọ nọ na ibudata. Ị nwere ike iji kọmputa gị dị otú ahụ ngwá ọrụ iji chọta ya.
Nzọụkwụ 2: Ẹkedori iTunes.
Ozugbo iTunes na-agba ọsọ, chọta faịlụ ịchọrọ ịgbakwunye na ịdọrọ ya n'ime-emeghe iTune window. Ị ga-ahụ dị iche iche ihe na-adabere version nke iTunes ị na-agba:
Na iTunes 10 na mbụ nsụgharị na-MP3 ga-a gbakwunyere ịrịba ama na-esote ya na-eje ozi na-egosi na abụ a na-kwukwara.
Na iTunes 11 na elu-otu gbakwunyere ịrịba ama a ga-hụrụ na "Song View"
Na iTunes 11 na elu -in "Ndị ọzọ na-ele" gbakwunyere ịrịba ama adịghị egosi. Ọ na-anọchi a ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ ndepụta na-egosi na elu na n'èzí nke iTunes window.
Nzọụkwụ 3: nhazi & Categorizing
iTunes ga hazie faịlụ na categorize ya site album, omenkà, aha wdg Ị ga-enwe ike ịhụ ọganihu mmanya maka importing ka iTunes window.
Part 2. nbudata Free music ka iTunes si weebụsaịtị
Youtube bụ a mma isi iyi nke fun na ntụrụndụ nke nwere ike na-gị na enyi glued kọmputa ogologo ụbọchị nile. Otú ọ dị, ọ na-ata ahụhụ site na otu downside na na ị chọrọ njikọ Ịntanetị na-enweta ọrụ. Ozi ọma bụ na a na-adịghị ga-ịbụ ikpe ọzọ dị ka ọ bụ omume ugbu a ibudata ị tube music ka iTunes site TunesGo. Ka ibudata ị tube music ka iTunes site TunesGo, soro mfe nzọụkwụ depụtara n'okpuru:
• Na ndabara n'ụlọ peeji nke, pịa 'ị tube ka iTunes'
• Na nchọgharị Detuo URL nke lekwasịrị music na gị tube.
• n'elu ọrụ mmanya, pịa na iTunes icon na depụtaghachiri URL ga-akpaghị aka pasted.
• Pịa download na-amalite nbudata na song. Mgbe download zuru ezu, music ga-akpaghị aka ga converted MP3 na atụkwasịkwara "Ị tube Downloads" listi ọkpụkpọ na iTunes.
Part 3. Olee otú ibudata free music ka itunes si ios ngwaọrụ (iphone, ipad)
Dị nnọọ zụtara ihe iPhone na ị na-eche otú i nwere ike nyefee gị ngwaọrụ music ka iTunes? Ị nwere ike iji TunesGo nke bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iOS 9 na iTunes 12.1. Na TunesGo, ị nwere ike ugbu a seamlessly nyefee gị music si gị ipad, iphone ma ọ bụ iPod gị iTunes. Ma ị furu efu a kọmputa ma ọ bụ dochie anya ya ọhụrụ otu, TunesGo nwere ike inyere ịkwaga gị music si gị IOS ngwaọrụ azụ ka iTunes n'ọbá akwụkwọ na kọmputa. A nkuzi ga-eduzi gị na otú nyefee ngwaọrụ gị music ka iTunes. Ndị na-esonụ ga-agbasoriri na-ebufe ngwaọrụ music ka iTunes:
• Na ndabara homepage, pịa 'transfer music'. Tinye transfer music peeji mgbe ngwaọrụ jikọọ.
• Lelee niile songs na-exported ka iTunes wee pịa 'bupu' na mgbe ahụ 'Mbupụ na iTunes'.
Get nkọwa ndị ọzọ >> Nyefee Music Site iPhone / iPad / iPod ka iTunes
Part 4. Olee otú ibudata free music ka itunes si android ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị nọwo na-a ogologo oge ọrụ nke IOS ngwaọrụ dị ka iphone, ipad ma ọ bụ iPod e nwere elu likelihood na ọtụtụ n'ime gị music collection bụ ihe e kekọtaworo na iTunes. Ịzụ ihe gam akporo ngwaọrụ wee chee nsogbu na ịnweta gị iTunes music on android dị ka Apple adịghị enye ọ bụla ngwọta nyefee music si iTunes ka gam akporo. Ezie na ọ dịghị iTunes maka android, e nwere ụzọ dị iche iche nwere ike ji mee na-esi gị uzo on. N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ike ga-eji na-Job mere:
Iji aka nyefee iTunes music ka android ngwaọrụ
Site n'iji n'elu 4 android ngwa idetuo iTunes media na android ngwaọrụ.
Site n'iji wondershare TunesGo.
Get nkọwa ndị ọzọ >> Nyefee music si gam akporo ka iTunes
The quickest usoro nke na-ebufe ọdịnaya site iTunes n'ọbá akwụkwọ ka Android nanị otu click bụ site n'iji wondershare TunesGo. Ọ mgbari mgbochi nke iTunes na-ahapụ android ọrụ na-eji iTunes dị ka onye na IOS ngwaọrụ. Ndị na-esonụ ga-agbasoriri na-ebufe media ọdịnaya site iTunes ka Android site n'iji wondershare-awụ ọsọ n'ugwu-aga:
• Mee gị android ngwaọrụ, wee wụnye na-agba ọsọ TunesGo na kọmputa gị
• Jikọọ gị android gị na kọmputa site n'iji eriri USB.
• Export iTunes music ka android ngwaọrụ. Mgbe android ngwaọrụ achọpụtara, ọ ga-egosipụta na interface. N'okpuru iTunes n'ọbá akwụkwọ họrọ "music" udi. Mgbe ha niile songs na iTunes na-egosi nne Mmetụta ndị ị chọrọ ma họrọ "mbupụ" na mgbe "Mbupụ na android".
TunesGo akwado android 2.1 ka Android 5.0 na IOS 5 IOS 9.
Part 5. Olee otú Download Free Music ka iTunes si PC / Mac
• Dọrọ a nchekwa ma ọ bụ a faịlụ site na desktọọpụ ka iTunes window. Ọ bụrụ na ị ịdọrọ a nchekwa, niile faịlụ ọ na e dere ga-atụkwasịkwara gị n'ọbá akwụkwọ.
• Na iTunes, họrọ faịlụ, mgbe ahụ, 'Tinye ka Library' ịchọta faịlụ ma ọ bụ ndị na nchekwa ma pịa 'oghe'. Ọ bụrụ na faịlụ bụ site Mac, ndabara iTunes nsị a oyiri nke ọ bụla faịlụ na iTunes nchekwa.
Ị nwere ike nweta enyemaka site na nke a: Nyefee Free Music ka iTunes si PC / Mac
> Resource> iTunes> Olee otú Download Free Music ka iTunes